Yaa qaadi kara garta Xaaf iyo Farmaajo? | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Yaa qaadi kara garta Xaaf iyo Farmaajo?
Yaa qaadi kara garta Xaaf iyo Farmaajo?
Madaxweyne Madaxweyne Farmaajo wuxuu ku dheggan yahay in doorasho Madaxweyne ka dhacdo Galmudug bisha Julay 2019 sababtoo ah waxaa ku eg muddada 4 sano ee ka soo wareegtay xilhaynta Madaxweyne Cabdikarim Xussein Guled oo la doortay 4 July 2015, isna casilay 26kii Febraayo 2017. 3 Maajo 2017 waxaa la doortay Madaxweyne Axmed Ducaale Ghelle Xaaf. Dastuurka Galmudug wuxuu dhigaya in Madaxweynaha la doorto haynayo xilka 4 sano, mana dhigayo in haddii Madaxweyne la doortay dhammeysan waayo waqtiga xilkiisa sabab kasta – geeri, is casilaad, xil ka qaadis – waxaa dhammeystiraya Madaxweyne Ku Xigeenka ama Madaxweyne cusub ee la doorto.
Qodobka 95 (4) ee Dastuurka Federaalka KMG wuxuu qeexaya in Madaxweynaha Federaalka dhammeystirayo muddada xilhaynta Madaxweynihii hore haddii uusan waqtigiisa dhammeysan.
Qodobka 142 wuxuu caddeynayaa in ilaa inta la is waafajinayo Dastuurka DF iyo Dastuurrada DG, DF waxaa waajib ku ah inay ixtiraamto dastuurka DG kasta. Sidaa darted, ma jirto awood iyo shaqo uu Madaxweynaha DF ku leeyahay doorashada Madaxweynayaasha DG. Waa arrin u gaar ah Dowlad Goboledyada.
Qodobka 120 ee Dastuurka Federaalka KMG wuxuu tilmaamaya in dastuurrada Maamul Goboleedyada ay nidaaminayaan dhismaha hay’adaha sharci dejinta iyo Fulinta ee Maamul kasta ee Xubinta ka ah Dowladda Federaalka si ka madax bannaan DF.
DG kasta waxay yeelanaysaa Maxkamad Sare oo u gaar ah ee ka madaxbannaan Maxkamadda Sare ee Dowladda Federaalka. DF iyo DG waxaa ka dhexeeya Maxkamadda Dastuurka keli ah.
Inta kor ku qoran waxaa ka muhiimsan mideynta Maamulladii Galmudug u kala qaybsaneed, oo beesha caalamka ka dalbatay inay midoobaan si loo kaalmeeyo. Dadaal dheer iyo tanaasulaad uu sameeyay Madaxweyne Xaaf darted, waxaa midoobay dhinacyadii Galmudug, waxaana lagu heshiiyay in la abuuro jagada Wasiirka 1aad (Ra’isul Wasaare,), la mideeyo 2 dastuur, la mideeyo 2 barlamaan, la mideeyo astaanta labadii Maamul, la mideeyo Golaha Wasiirrada, la mideeyo Ciidammada nabadgelyada, kaddibna dastuurka cusub laga ansixiyo Barlamaanka cusub, ayadoo muddada xilhaynta barlamaanka iyo Madaxweynaha Axmed Ducaale Xaaf ka bilaabmeysonmaalinta la ansixiyo dastuurka cusub oo ku aadaneyd 4 Maajo 2018. Taaso macnaheedu wuxuu yahay in muddada xilhaynta barlamaanka iyo Madaxweynaha Galmudug ku dhammaneyso 3 Maajo 2022. Heshiiska lagu mideynayay dhinacyada Galmudug iyo xafladda dhammeystirka mideynta maamulka Galmudug oo ka dhacday Caasimada Galmudug ee Dhusamareb waxaa goobjoog ka ahaa oo wax ka xalaaleeyay Madaxweyne Farmaajo, Madaxweynayaasha DG, Guddoomiyaha Gobolka Benadir, iyo Beesha caalamka oo Qarammada Midoobay ay hoggaamineysay, kaddibna waxaa soo taageray Golaha Ammaanka ee QM. Waa jirta in ay jireen deegaan iyo xubno ka soo horjeeday heshiiska madaama heshiiska mideynta Maamullada Galmudug uu kallifayay in deegaanka cadaado laga soo guuro, loona soo guuro Magaala Madaxda Galmudug ee Dhusamareb, isla markaa waxaa jiray kala duwanaanshaha qaab dhismeedka labada maamul. Guud ahaan, waxaa xaqiiqa ah in si wanaagsan loo soo dhoweeyay mideynta Maamulka Galmudug si loo ambaqaado daryeelka horumarinta bulshada deegaanka oo dhan. Haseyeeshe, fidnada joogtada ah waxay ka socotay DF oo kor iyo hoosba dooneysa inay Madaxweyne Xaaf xilka ka tuurto waqti kasta oo suuragal ah.
Madaxweyne Farmaajo ma cuskanayo dastuur iyo sharci u banneynaya inuu farageliyo, qabanqaabiyo khasbo doorashada Madaxweynaha Galmudug oo 2018 loo sharciyeyay 4 sano. Madaxweyne loo doortay, ku dhaartay inuu ilaalinayo dhowrista dastuurka, sharciga, danta dadka iyo dalka, haseyeeshe u tafaxeytay ku tumashada dastuurka iyo sharciga iyo fidno siyaasadeed iyo nabadgelyo xumo waa musiibo u baahan in laga hortago, la iskana difaaco.
Xadgudubkaas gardarrada ah ee aan wax sharci ah waafaqsaneyn wuxuu albaabka u furaya adeegsiga xoog, is maquunin, laalush, isku dir, iyo dagaal ku saleysan in qof walba sharciga gacantiisa ku qaato. Madaama aysan jirin Maxkamadda Dastuurka, waxaa loo baahan yahay khubaro iyo diblonaasiyiin caalami ah ee aqoon fiicaan u leh siyaasadda iyo dowladnimada Soomaaliya oo u kala garqaada Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweyne Axmed Ducaale Xaaf. Haddii kale, waxaa madaxa lala galaya fidno iyo colaad siyaasadeed.
Previous articleMaxaa keenay in Khayre iyo Farmaajo ka Aamusaan fashilka Shirkii Garowe
Next articleXog: kulan dhexmaray Muuse Suudi iyo Xaaf oo ka dhacay Nayroobi